लकडाउनमा आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ? :: सुनिता सिटौला :: Setopati
लकडाउनमा आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ?
सुनिता सिटौला काठमाडौं, चैत २३
लक डाउनमा खुलेको चावहिलको एउटा तरकारी पसल। तस्बिर: सुनिता सिटौला/सेतोपाटी
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको करिब २ साता पुग्न लागेको छ। लकडाउन घोषणाको पहिलो हप्ता सरकारले आपूर्ति व्यवस्थाका लागि निर्णय गर्नमै समय खर्चियो। उपभोक्ताको सास्ती कायमै थियो।
दोस्रो हप्ताको सुरुवातदेखि सरकारले लकडाउन अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा ठोस काम गरिरहेको बताएको छ। उपभोक्तालाई सहज हुनेगरी बजार व्यवस्था मिलाइएको सरकारले बताउँदै आएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई खलबलिन नदिनका लागि सरकारले गएको साता अत्यावश्यकीय वस्तुको उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै यस्ता उद्योगको उत्पादन,वितरण र आयातमा सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए।
‘आपूर्ति बढाउन हामीले पूर्ण रूपमा नभएनि लिमिट रूपमा अत्यावश्यक उद्योग खोल्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।
दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल अधिकांश भारतबाट आउने भएकाले अहिले पनि त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए।
खाद्य वस्तुको वितरणमा पनि सरकारले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘ठूला खुद्रा व्यवसायीको गोदामबाट सामान पसलसम्म लैजान ढुवानीको व्यवस्था, अत्यावश्यक ठाउँमा घुम्ती मार्फत ग्यास तथा खाद्यान्न वितरण, फलफूल तथा तरकारी बजारसम्म लैजान ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने।
वाणिज्य विभागको हटलाइन नम्बर ११३७ मा फोन गर्ने ग्राहकलाई ग्यासको व्यवस्था गरिएको ढकालले बताए।
‘काठमाडौं उपत्यकामा एक दुई वटा ट्रक ग्यास लिएर हिडिरहेको हुन्छ, विभागको नम्बरमा फोन गरेर ग्यास पाइन भन्ने उपभोक्तालाई ट्रकबाट ग्यास वितरण गरिएको छ। यतिमात्र होइन नेपाभरको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौ। दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट भएपनि खाद्यन्न औषधि लगायतका वस्तु आपूर्ति गरेका छौ' उनले भने।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिनै प्राय व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसारको सामान स्टक राखेकाले सामानको अभाव नभएको बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म त सामानको अभाव छैन तर लकडाउन बढ्दै जाने हो भने चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ,’ उनले भने।
खुद्रा पसलमा सामान भएपनि पैसाको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी तर्सिएको उनको भनाइ छ।
‘सामान भएपनि नबेच्ने परिस्थित आइसक्यो। खाद्यान्नमा उपभोक्ताको भीड हुन्छ। व्यवसायीको सुरक्षाको लागि सरकारले केही व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने।
एकातिर सुरक्षा नहुनु अर्कोतिर सरकारकै एउटा निकाय सामान बेच भन्ने अर्को निकाय आएर बन्द गर् भन्ने गरेकाले व्यवसायी दोधारमा परेको उनले बताए।
‘घरमा पसल हुनेले साझँ विहान समय मिलाएर खोलेका छन्, तर जसको बसाइँ एकातिर पसल अर्कोतिर छ उसलाई व्यापार गर्न असहज भएको छ,’ उनले भने।
होलसेलले सामान डेलिभरि नगर्दा खुद्रा व्यवसायीलाई असहज भएको उनी बताउँछन्।
‘होलसेल सामान लिन आउनुहुन्छ भने दिन्छौं डेलिभरि गर्न सक्दैनौं भन्छन्। आफै लिन जान ढुवानी साधन पाइँदैन,’ उनले भने।
खाद्य र साल्ट ट्रेडिङको सामान खुद्रा पसललाई दिए बेच्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको नेपाल एलपी ग्यासका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए।
‘ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, हामीले डीपो तथा घुम्ती सेवामार्फत बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले उपभोक्ताको भीड पनि कम भइसकेको छ।’
लकडाउन जारी भएपछि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनि साढे ४ देखि ५ सय टन भित्रिरहेको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन छ भने २५ प्रतिशत भारतीय रहेको छ। बर्षे उत्पादन सुरू भएकाले तरकारीमा कुनै समस्या नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत २३, २०७६, १६:१२:००
मन्त्रीले भने- बस चलाउनुस्, सरकारको सहयोगबिना ग्यारेजबाट निकाल्न सक्दैनौंः व्यवसायी
पेट्रोल/ डिजेल अटो प्राइसिङभन्दा सस्तो दिएका छौँः निगम, नाफा झण्डै ११ अर्ब